Falconiformes & Accipitriformes[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆရာ ကျွန်တော် enwiki မှာ မနေ့က သွားဖတ်ကြည့်တော့၊ ဒီကောင်တွေက မျိုးတူအစု(clade)တွေ ထပ်ပြောင်းကြပြန်ပြီ။ အရင်ထဲက ကျွန်တော်တို့ သိထားတဲ့ Birds of Prey တွေရဲ့ မျိုးစဉ် Falconiformes ထဲမှာ Falcon ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ Eagles, Vultures (New World မပါ), Hawks နဲ့ Kites တို့ကိုစုစည်းပြီး သီးခြားအဆင့်တူ မျိုးစဉ် Accipitriformes ဆိုပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး ကမ္ဘာသစ်လင်းတ ကွန်းဒေါတွေက သပ်သပ် မျိုးစဉ် Cathartiformes ရယ်ဖွဲ့လိုက်တယ်။ ဇီးကွက်တွေလည်း အကုန်စုပြီးတော့ မျိုးစဉ်ရဲ့ အထက်အဆင့်မှာရှိတဲ့ Strigiformes မျိုးတူစု(clade) ဖြစ်သွားပြီ။ ကျွန်တော် Falconiformes ကို အသစ် ဘာသာပြန်ထားပြီးသားတော့ ရှိတယ်။ ဆရာတင်ထားတဲ့ "စွန်၊ လင်းတနှင့် အလားတူငှက်များ" ဆောင်းပါးနဲ့ တိုက်နေလို့ လာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာပါ ဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့် Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၀၅:၃၆၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Pho Sai: ကျနော်က ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်များ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပဲ ကိုးကားထားတော့ အကြောင်းအရာတွေက update မဖြစ်တော့တာဖြစ်မယ်။ အခုလို ထဲထဲဝင်ဝင်ထိတော့ ကျနော်က မသိပါဘူး။ ဘရိုပဲ update ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဆက်လက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျနော် ကူညီလုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင် ပြောပါခင်ဗျ။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၅:၄၇၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Dr Lotus Black ၊ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါဆို ကျွန်တော် Wikidata change ပြီး Falconiformes အတွက် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာကို ထည့်လိုက်ပါ့မယ်။ Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၀၅:၅၃၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆွေးနွေးချက်:စင်ဒရဲလား (၁၉၅၀ ရုပ်ရှင်)[ပြင်ဆင်ရန်]
I created stub about this movie but the main page was protected. Can it be moved to main space? Also I couldn't write much, can it be expanded? Finally The Little Mermaid is not about the Disney movie, should it be deleted? I would writeastub about it, but I don't know what it should be called. 104.58.147.208 ၀၄:၀၁၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Mermaid is ရေသူမ in Burmese and so the page title should be something like ရေသူမကလေး. I guess you're not native Burmese speaker. The Little Mermaid will be deleted of course. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၉၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Would you know who could write about these articles? 104.58.147.208 ၀၄:၄၄၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Liv and Maddie could not be translated directly into Burmese as it's english names, maybe it could be done by transliteration. But, i'm not good in english phonetic. Maybe အသုံးပြုသူ:Aungookingofcelestials could help with that. I'm sorry. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၅:၀၄၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
But, would you know how to say it's about identical twin sisters? At the very least, I wanted more written about the other movies. Like that The Fox and the Hound tells the story of the unlikely friendship betweenared fox andahound dog, or that it was produced by Walt Disney Productions and loosely based on the 1967 novel of the same name by Daniel P. Mannix. Last time I asked Aungookingofcelestials, he/she was not interested in writing the articles. But do you know who could? 104.58.147.208 ၂၂:၁၃၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
":You can’t translate it, because of no sense in Burmese Language. But you can do transliteration like “လစ်ဗ် ရယ်၊ မဒီ ရယ်” (or) “လစ်ဗ် နဲ့ မဒီ”. Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၂၂:၄၃၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)"[အကြောင်းပြန်ရန်]
What I don't know is, which one should be used? I don't know what text to write about it either. I do in English, but not in Burmese. I haven't found anyone interested in it yet. Is there not anyone? 104.58.147.208 ၀၂:၄၇၊ ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
I saw the deletion of SpongeBob SquarePants, another TV show that interests me (I watch it all the time). Do you know who could write that article? 104.58.147.208 ၀၂:၀၀၊ ၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Yours sincerely, Multituberculata (ဆွေးနွေး) ၂၁:၅၉၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank you very much for the new article! Can you also create the article en:Azerbaijanis in Burmese Wikipedia? That is all. Multituberculata (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၄၊ ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Your GA nomination of ကမ္ဘာဂြိုဟ်[ပြင်ဆင်ရန်]
Hi there, I'm pleased to inform you that I've begun reviewing the article ကမ္ဘာဂြိုဟ် you nominated for GA-status according to the criteria. This process may take up to7days. Feel free to contact me with any questions or comments you might have during this period. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၃:၅၂၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
The article ကမ္ဘာဂြိုဟ် you nominated asagood article has passed ; see Talk:ကမ္ဘာဂြိုဟ် for comments about the article. Well done! ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၁၁:၀၉၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၀၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆောင်းပါးရေးသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါးကို မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ကိုယ်ရေးသားလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးဟာ ဘာဖြစ်လို့ အလျင်အမြန် အဖျက်ခံရသလဲဆိုတာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးမှာ ရေးသားလိုက်တဲ့ စာသားဟာ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရင်းမြစ်တွေဆီက ကိုးကားထားမျိုးမရှိဘူးဆိုရင် နောက်ပြန်အပြင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၀၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
သိခွင့်ပေးသည့်အတွက် သင့်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၉:၅၁၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျုပ်ရေးတာတွေက ဘယ်အချက်နဲ့ ငြိတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပါ။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၉:၅၉၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဝီကီပီးဒီးယား:G10 & ဘက်လိုက်မှုကင်းခြင်းမူဝါဒ အရ ဖျက်ပစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင် ပြောရရင် စစ်အစိုးရဘက်က CRPH, NUG အစိုးရကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ စွပ်စွဲထားတာ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပဲ NUG ဘက်ကလည်း စစ်အစိုးရကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ်မီဒီယာ၊ DVB အစရှိတဲ့ မီဒီယာအချို့ကလွဲရင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း သတင်းမီဒီယာတွေက စစ်ကောင်စီကို အကြမ်းဖက်လို့ သုံးနှုန်းတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါတွေဟာ အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေဆီက အကိုးအကားမပါဘဲ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရပါတယ်။ ဟိုဘက်ကမှန်တယ် ဒီဘက်ကမှားတယ်လို့ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ရေးသားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝီကီပီဒီးယားက ဘာမဟုတ်ဘူးလဲတွင်လည်းရှု။ ဒါကြောင့် NUG မကောင်းကြောင်း ဘက်လိုက်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ဖြစ်၊ စစ်ကောင်စီမကောင်းကြောင်း ဘက်လိုက်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ဖြစ် ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ ဘက်လိုက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းမူဝါဒအရ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုပါတယ်။ နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၉၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာ။ ရှင်းပြပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၂:၅၈၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလို့ခေါ်ရင် ဖျက်ပစ်ကြောင်းကို ရှင်းပြပေးပါ။ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတာဟာ စစ်တပ်ကိုဘက်လိုက်တဲ့ အမည်ဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီဆိုတာဟာလည်း အရပ်ဘက်ကိုလိုက်တဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဆိုတာဟာ ဘက်မလိုက်တဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ BBC ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုပဲခေါ်တာပါ။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၃:၀၄၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို မေးမြန်း ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၃:၅၈၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
အကိုးအကား မခိုင်လုံတဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် အကြောင်းအရာတွေကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရင်းမြစ်တွေဆီရဲ့ အကိုးအကားမပါဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ထည်းသွင်းတာဟာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ဆောင်ရွက်မှုလို့ သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ အကြံပေးချင်တာကတော့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားမှာ မိတ်ဆွေတည်းဖြတ်လိုတဲ့ဆောင်းပါးကို အကိုးအကားတွေနဲ့ ထည့်သွင်းပြီး တည်းဖြတ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီဘက်က လက်ခံတယ်ဆိုမှ မြန်မာဝီကီဘက်မှာ အကိုးအကားတွေနဲ့ ပြန်လည်တည်းဖြတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၈၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်းအောင်လှိုင် ဆောင်းပါမှာ မအလ၊၁၀တန်းကို စာခိုးချပြီးအောင်တယ်၊စတဲ့ ပေါက်ကရတွေရေးခဲ့တာကိုသိပါတယ်။ အခြား ဆောင်းပါးတွေမှာ အဲ့လိုမျိုး ပေါက်ကရတွေ မရေးပါဘူး။ ထပ်ရှင်းပြပါ။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၄:၂၅၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အာ့ဆို ပြင်ချင်ရင် အဲ့ အကြာင်းရေးထားတဲ့ page ရဲ့ link ကို ကိုးကား ထဲမှာ ထည့်ပေးရင်ရပြီပေါ့။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၄:၂၈၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရင်းမြစ်တွေလို့ ပြောထားပါတယ်။ ဖေ့စဘွတ်ခ်လိုမျိုး မည်သူမဆို သတင်းတင်နိုင်တဲ့ စာမျက်နှာတွေက ရေးသားချက်တွေကို မဆိုလိုပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၄၀၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Myanmar Now, Mizzima, DVB, BBC, CNN တို့ကဟာဆိုရင် ရလား။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မသိလို့မေးနေတာပါ။ ဖြေကြပါအုံး။ Myanmar Now, Mizzima, DVB, BBC, CNN တို့ကသတင်းဆို ရင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရင်းမြစ်တွေလို့ ပြောလို့ရလားလို့။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၅:၂၂၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Myanmar Now, Mizzima, DVB, စတဲ့မီဒီယာအချို့က စစ်အစိုးရမကောင်းကြောင်း အနည်းငယ်ဘက်လိုက်မှုရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုလိုအငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စအတွက် မိတ်ဆွေ ကိုးကားချင်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ CNN, Bangkok Post, အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီး မီဒီယာတွေရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကို ကိုးကားရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီဒီးယားမှာ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိ အကိုးအကားတွေနဲ့ သွားရေးသားဖို့ ထပ်လောင်းအကြံပြုပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၆:၃၉၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဖြေပေးတာကျေးဇူးပါ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၆:၄၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၄:၃၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Neyya Swan Yi ဘာလုပ်လုပ် အဖျက်ခံရတယ်ဆိုတာထက် ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ တည်းဖြတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖယ်ရှားခံရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၄၁၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မေးတာကို ဖြေအုံးလေ။ အင်္ဂလိပ်ဝီကီက ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဘာသာပြန်ပြီးရေးရင် ဖျက်မှာလား။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၃၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Neyya Swan Yi:အင်္ဂလိပ်ဝီကီထဲက မူရင်းအဘော်အတိုင်း အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ပြီးရေးရင် ပြသနာမရှိနိုင်ပါ။ မြန်မာဝီကီထဲက ဆောင်းပါးအတော်များများလည်း အင်္ဂလိပ်ဝီကီက ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အင်္ဂလိပ်ဝီကီဘက်မှာလည်း လက်ရှိ စစ်အစိုးရကို :State Administration Council (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ) လို့ပဲ သုံးနှုန်းပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၄၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကောင်းပြီလေ။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကောင်စီဆိုတာဟာ အစိုးရအဆင့်မရှိပါဘူ။ မအလ ခေါင်းဆောင်ပြီးး စကစ ဖွဲ့ထားတဲ့ အစိုးရဟာ အိမ်စောင့်အစိုးရ လို့ အမည်ခံပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ထည့်သွင်းစည်းစားပေးလိုပါတယ်။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၅:၂၆၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဒီအကြောင်း အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရ ဆင်းသွားပြီး နောက်အစိုးရသစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် မြန်မာဝီကီမှာက နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ လို့ တရားဝင်အမည်နဲ့ မှတ်တမ်းအဖြစ် ကျန်နေခဲ့မှာပါ။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၆:၅၁၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၆:၄၃၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဆောင်းပါးက ရှိနေပြီးသားဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၆:၅၂၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မအလ ဆောင်းပါးမျိုးထဲမှာ ဗကပ ဆိုပြီး အတိုရေးထားတဲ့ ဟာမျိးကိုပြောတာပါ။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၆:၅၄၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အဲဒါမျိုးက ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ အရှည်ပြန်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ [[ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ|ဗကပ]] ဆိုပြီးလည်း ညွှန်းဆိုရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဗကပ လို့ ပေါ်လာမှာပါ။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၇:၀၀၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ok Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၇:၀၁၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၇:၀၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi[အကြောင်းပြန်ရန်]
များသောအားဖြင့် ကိုးကားနိုင်ပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၇:၁၃၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကောင်းပါပြီ။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၇:၁၄၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]